I-Marketpath - Ukuphathwa Kokuqukethwe Okulula | Martech Zone
I-Marketpath - Ukuphathwa Kokuqukethwe Okwenziwe lula
NgoMgqibelo, Okthoba 24, 2009 Lwesine, Disemba 5, 2013 Douglas Karr
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngivakashele iqembu e Indlela yemakethe futhi bathole ukuboniswa kweSoftware yabo njengeService (SaaS) Content Management System (CMS) - okubandakanya isisombululo se-ecommerce nesisekelo sokubloga okuyisisekelo. Ngangizwile okuningi ngenkampani kepha kwakukuhle ukuthi ekugcineni ngithole idemo futhi ngibone ukuthi yini abayizuzile.
UMat Zentz ungomunye wabasunguli be-Marketpath futhi wasebenza ku-ExactTarget emuva ezinsukwini zayo zokuqala. Akakufihli iqiniso lokuthi i-interface yabo elula ithonywe kusukela ngesikhathi sakhe I-ExactTarget. Ukuhamba okuhle. Iningi lezinhlelo zokuphathwa kokuqukethwe lidinga ijika lokufunda eliphakeme ukuze ungene kulo. I-Marketpath igcine ezazo zilula kakhulu futhi zisebenziseka kalula. Uma wazi ukuthi ungaluvula kanjani uhlelo ku-Windows noma ku-Mac, uzokwazi ukusebenzisa iMarkPath.
Isithombe-skrini se-Marketpath CMS Administration
Isithombe-skrini se-Marketpath CMS Editor
Isithombe-skrini se-Marketpath CMS Security
Isithombe-skrini se-Marketpath CMS Google Analytics
Njengoba ukwazi ukubona ngama-skrini, uhlelo lokusebenza olulula ngendlela ongalusebenzisa - kepha ungakha amawebhusayithi anzima kakhulu nezitolo eziku-inthanethi ngalo. IHarry Potter Wall Art yikhasimende lakamuva le-Marketpath elihlinzeka ngokubheka ukuthi ingcikitsi yakho ingasebenza ngamandla kangakanani nokuthi izixazululo zesayithi neze-ecommerce zingenamthungo kangakanani.
Ngenkathi useMarkpath, Highbridge inikeze ngempendulo ethile ekusebenzeni kwesayithi ngokusesha. Ngiyakuthanda ukusiza izinkampani zethu zesifunda futhi kuningi okuthenjiswa kusisombululo sikaMarkpath!
IMarkpath ineqembu elikhulu nesixazululo esihle. Uma unquma ukubashayela ucingo, qiniseka ukubazisa ukuthi ufunda ngesixazululo sabo ku- Martech Zone!
Tags: CMSukuphathwa kokuqukethweuhlelo lokuphatha okuqukethweplatform ecommerceimakethesaasama-saas cms
bing + twitter = ukucinga ngesikhathi sangempela